‘मेरो ब्वाईफ्रेण्ड छ जस्तो लाग्छ र ?’ – भलिबलकी प्रतिभासँगको १२–२७ कुरा | Hamro Khelkud
काठमाडौं– नाम जस्तै प्रतिभा भएकी प्रतिभा माली भलिबललाई पछ्याउने जो कोहीले चिन्ने नाम हो । पछिल्लो केही बर्षयताको कुनै पनि भलिबल प्रतियोगिता यस्तो छैन, जहाँ प्रतिभाको चर्चा नभएको होस् । उनले हरेक जसो प्रतियोगितामा कुनै न कुनै व्यक्तिगत उपाधि जितेकी नै हुन्छिन् ।
भलिबलमा मुख्यतः विभागिय टोली (सेना, प्रहरी र एपिएफ) कै बढी दबदबा रहने गरेको छ । तर, ती विभागिय टोलीलाई कडा चुनौति दिने र हराउने क्षमता भने राख्ने टोली भनेको प्रतिभा सम्मिलित न्यू डाइमन्ड क्लब नै हो । भलिबलका धेरै प्रतियोगितामा अहिले न्यू डाइमन्ड र एपिएफकै फाइनल हुने गरको छ । त्यसमा कहिले न्यू डाइमन्ड त कहिले एपिएफले जित्ने गरेका छन् ।
यसै बर्ष एसइइ उर्तिण गरेकी नैकापकी प्रतिभा गत बर्ष व्यसायिक भलिबल खेल्न माल्दिभ्स पनि पुगेकी थिइन् । उनले त्यहाँको टोलीलाई जित दिलाउँदा हरेक खेलमा प्लेयर अफ दी म्याचको उपाधि जितेकी थिइन् । राष्ट्रिय महिला टोलीमा पनि उनी पहिलो रोजाइकी खेलाडी हुन् । सानै उमेरमा राष्ट्रिय टोलीमा पर्दै भलिबल समर्थकका बीचमा लोकप्रिय १६ वर्षे प्रतिभा मेहनत र सबैको हौसलाकै कारण यहाँ सम्म पुग्न सकेको बताउँछिन् ।
न्यू डाइमन्ड क्लब विशेष महिला भलिबल खेलाडी उत्पादनका लागि परिचित नाम हो । यसअघि चर्चामा रहेकी रमिला तन्डुकार पनि न्यू डाइमन्डकै उत्पादन हुन् । त्यहि लोकप्रियताका कारण प्रतिभा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्ने पल्सर स्पोर्टस अवार्डको गत बर्ष पिपल्स च्वाइस अवार्डमा मनोनयनमा परेकी थिइन् ।
प्रतिभा युवा पुस्तामा लोकप्रिय बन्दै गएको र उनको खेल कौशलपनि अन्यको भन्दा विशेष रहेको बताइन्छ । उनलाई हालै मात्र खेल पोशाक उत्पादक कम्पनी साहस स्पोर्टस कम्पनीले एक बर्षको लागि ब्रान्ड एम्बासडर घोषणा गरेको छ । उनले एम्बासडर रहे वापत सहास स्पोर्टसबाट मासिक १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छिन् । भविष्यमा जुन सुकै पेशामा गएपनि नेपालको भलिबलसँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिराख्ने उनको योजना छ । खेल र अध्ययनलाई उत्तिकै महत्व दिने प्रतिभासँग हाम्रो खेलकुद डटकमका दिपेश तिमलसिनाले गरेको १२–२७ कुरा ।
– ७ वर्षको उमेरमा २ कक्षा पढ्दा देखि खेल्न थालेकी हु ।
– म ६/७ कक्षा पढ्दा नै स्कुल लेभलको प्रतियोगिता जित्न थालेकी हु । जित्दा एकदमै खुसी लाग्थ्यो । मेडल लिदै दंग पर्थे । झन् स्वर्ण पदक जित्दा त खुसीको सिमा नै हुन्नथ्यो । भलिबल खेलेर अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न सकिन्छ भन्ने निकै पछि मात्र थाहा पाएकी थिए ।
३. भलिबलमा कसरी लाग्नु भयो ?
– कोच कुमार राई र मेरो सानो ममी ( भलिबल संघकी कोषाध्यक्ष सुन केशरी माली) ले मलाई भलिबलमा लाग्न हौसाउनु भयो । मलाई कोचले सुरुवातकै दिनबाट तिम्रो शारीरिक बनावोट ठूलो छ, निरन्तर खेल्यौं भने राम्रो गर्न सक्छौ भनेर हौसाउँनु भएको थियो ।
– डिजायर ८२५, मूल्य रु.१९ हजार
५. कुन बाइक चढ्नु हुन्छ र मुल्य ?
– अहिलेसम्म खेलेर ४ वटा स्कुटर जितेको छु । तर,चलाउन पाएको छैन ।
– निरन्तर आम्दानीको स्रोत छैन, कहिले काहिँ सम्मान पाउछु । अहिले सहास स्पोर्टसबाट बार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँको सम्झौत गरेकी छु ।
साहस स्पोर्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक जनक न्यौपानेसँग प्रतिभा
– अरु सामान्य केटीहरु जस्तै हुन्थे होला । साथीसंग घुम्न जाने, सपिंङ गर्ने , रमाइलो गर्ने त्यस्तै होला । पढाईमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न पनि सक्थे ।
– कक्षा ११मा पढ्दै छु ।
– एनिमेटेड कार्टुन धेरै हेर्छु । फिल्म खासै हेर्दिन, पछिल्लो पटक एनिमेटेड कार्टुन मोहना हेरकी थिए ।
– मन पर्ने नै छैन, धेरै फिल्म नै हेर्दिन ।
–वान डिरेकसन, केटि पेरी ।
– आनी छोइंगको शान्ति लुकाउ कहाँ ।
– मिल्ने केटा साथीहरु छन् । तर ब्वाईफ्रेण्ड छैन। मेरो ब्वाईफ्रेण्ड छ जस्तो लाग्छ र ?
– पढ्ने बानी खास छैन । ३/४ बर्ष अगाडी ट्वाइलाइट सिरिज पढ्न सुरु गरेको थिए तर पुरै पढेर भ्याइन ।
१५. अहिलेसम्म कति देश घुम्नु भयो ? सबैभन्दा मन परेको देश?
– ४ वटा देश घुमे । सबै भन्दा रमाइलो कतार लाग्यो, घुम्नको लागि नै गएको थिए ।
– पोखरा र नैकाप ।
– नियमित खाने सबै खानेकुरा मनपर्छ । मन नपर्ने खाने कुरा नै छैन । सबैभन्दा मनपर्ने आलु ।
– सधै चाहिँ पकाउन भ्याउदिन, मैले पकाएको दाल भात सबै जनाले ईन्जोय गरेर खानु हुन्छ, खुसी लाग्छ ।
– फेसबुकको म्यासेन्जर धेरै चलाउँछु । प्रस्तावहरु आईरहेको हुन्छ । तर समय भएको छैन भनेर टारदिन्छु । मलाई अहिलेको प्रेम आकर्षण मात्र हो जस्तो लाग्छ । आज लभ केहि समयमै ब्रेक–अप ।
– दुई कक्षमा हुँदा ब्लू डाईमन्डले आयोजना गरेको प्रतियोगिता खेसिकेपछि सानोममी जो स्कुल व्यवस्थापन समितिमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले ५ सय रुपैयाँ दिनु भएको थियो । त्यो पैसा ममीलाई गलेर दिएकी थिए ।
– पोखराको लामा चौरमा हुने राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता जित्दा निकै खुसि लागेको थियो । पहिला पनि प्रतियोगिताहरु जितिन्थ्यो तर मेरो भूमिका खासै हुदैन थियो । त्यो प्रतियोगितामा सिनियर खेलाडी रमिला दिदि र मनीषा दिदि हुनुहुन्थ्यो । तर पनि फाइनलको अन्तिम सेटमा गएर हामी एपिएफलाई हराउन सफल भएका थियौं ।
– फुर्सद नै हुदैन । धेरै सयम कलेज, ट्रेनिंङ, होमवर्कमै जान्छ ।
– साथीहरु संग घुम्न जान पाएको छैन । तर मलाई खेल्न रमाइलो लाग्ने भएर होला म ट्रेनिङको बेलामा साथीहरु संग जिस्किदा पनि सबै कुरा बिर्सिन्छु । अहिलेसम्म केहि कुरा मिस भने भएको छैन ।
– कृपा अधिकारी । हामी न्यु डाइमन्डबाट पनि सँगै खेल्छौं। रिया कुँवर उनि एनडिएबाट खेल्छिन् ।
– ब्राजिल र खेलाडीमा नेदरल्यान्ड्सकी सलेस्टी पार्क
२६. तपाईको नजरमा भलिबलको विकास कसरी होला ?
– टेक्निकल पक्षमा हामी निकै पछाडि छौ । राम्रो खल्ने टोलीको १० प्रतिशत पनि छैन हाम्रो खेल स्तर । हाम्रो खेल निकै तल्लो स्तरको छ । हाम्रो खेलकुद वातावरण खेल अनुकुल छैन । अरु धेरै पक्ष छन् जसमा सुधार गर्न जरुरी छ ।
– तपाईहरुको सुझाब म सधै लिन्छु सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रुपमा राम्रो भनिदिदा हौसाल मिल्छ । नराम्रो भन्दा किन त्यसो भन्नु भयो भनेर सुधार गर्न तिर लाग्छु ।